यी हुन् सीपछिको संभावित चिनियाँ नेतृत्व | Namastepost.com
यी हुन् सीपछिको संभावित चिनियाँ नेतृत्व
अन्तरास्ट्रिय October 23, 2017 ,
सांघाईमा जन्मेका चेङ ली अमेरिकी थिंकट्यांक ब्रुकिन्स इन्स्टिच्यूटस्थित फरेन पोलिसी कार्यक्रमको जोन एल थोर्नटन चाइना सेन्टरका सिनियर फेलो हुन्। चीनको पार्टी नेतृत्वमा पुस्ता परिवर्तनबारे विशेषज्ञता हासिल गरेका उनले पछिल्लो पटक पोलिटब्युरोको स्थायी समितिमा रहने सम्भावना भएका १२ नेताको जीवनीमूलक विश्लेषण गरेका छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औं महाधिवेसन बेइजिङमा चलिरहेको बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङका सम्भावित उत्तराधिकारीबारे शुक्रबार एसिया टाइम्सले चेङको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ। चीनको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन र पुस्ता परिवर्तनमा केन्द्रित यो अन्तर्वार्तामा चेङले ५४ वर्षीय हु चुनहुआलाई राष्ट्रपति सीले आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गर्नसक्ने बताएका छन्। अन्तर्वार्तालार्इ नेपालखबरले गरेकाे भावानुवाद :
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औं महाधिवेसनमा सीले आफ्ना उत्तराधिकारी घोषणा गर्लान्? को होला उनको उत्तराधिकारी?
मलाई लाग्छ, सीको उत्तराधिकारी हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका व्यक्ति ग्वाङदोङ पार्टी सचिव हु चुनहुआ हुन्।
सीको महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका नेतृत्वकर्ता वाङ क्विसानबारे के निर्णय होला? उनी पदमा कायम रहलान्, बढुवा होलान् वा निवृत्त होलान्?
मेरो व्यक्तिगत विचारमा वाङ क्विसान निवृत्त हुनेछन्। कसैले बाध्य बनाएर होइन, पार्टीको नियमअनुसार। वाङ एक क्षमतावान् राजनीतिज्ञ पनि हुन्। आफ्नो विरासतलाई सुरक्षित गर्ने र आफ्ना आश्रितहरुलाई सकेसम्म राम्रो पद दिलाउने यही नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्ने कुरा उनी बुझ्छन्। तर यो १०० प्रतिशत निश्चित छैन।
१९ औँ महाधिवेसनबाट मुख्यगरी के कुरा विकसित होला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
हामी आधारभूत रुपमा मुख्य तीन क्षेत्रलाई नियालिरहेका छौँ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ तेस्रोमा छ– पार्टीमा चयन हुने व्यक्तिहरु। सबैभन्दा कम महत्वको कुरा चाहिँ पहिलोमा छ।
सीले सेनामा के गरे?
उनले सेनामा तीन काम गरे। पहिलो, उनले चिनियाँ सेनाको रुसी मोडलमा आधारित संरचना परिवर्तन गरे। रुसी मोडलको सेनाले स्थल सेनामा बढी जोड दिन्थ्यो। तर अहिलेको चिनियाँ सेनाले जलसेना, हवाइ सेना र रणनीतिक सेनामा बढी जोड दिँदै संयुक्त अपरेसनलाई बढी महत्व दिएको छ।
अन्य सुधारहरु के के हुन्?
सीले बजार सुधारका कार्यक्रम ल्याए। केहीले सीले यो कार्यक्रम लागु नगरेको बताउँछन्। तर उनको प्राथमिकतामा अरु कुरा परेर यस्तो भएकोजस्तो मलाई लाग्छ। तै पनि उनले केही निश्चित कुराहरु दिए। घरेलु उपभोग उच्च छ, सेवा क्षेत्र पनि राम्रो बनेको छ। र अन्वेषणको कुराले मानिसहरुलाई प्रभावित बनाउन थालेको छ।
तपाईंले नियालिरहनुभएको तेस्रो क्षेत्र चाहिँ के हो?
तेस्रो र सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र भनेको महाधिवेसनबाट पार्टीको नेतृत्वमा को को रहन्छन् र नयाँ को आउँछन् भन्ने हो। वाङ क्विसान रहन्छन्, रहँदैनन्, सीले उत्तराधिकारी घोषणा गर्छन्, गर्दैनन् भन्नेबारे हामीले कुरा गरिसकेका छौँ।
आफ्नो भविष्यको नीतिबारे सीले के संकेत दिएका छन् त?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भनेको बुधबारको भाषणमा सीले चर्चा गरेको ‘नयाँ युग’ हो। उनले भने, देङको शासनकालमा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता र पछौटे उत्पादनका साधनहरुबीच तनाव विद्यमान थियो। तर अहिले चीन पछौटेपनबाट ग्रस्त छैन। चीनले चमत्कार गरेको छ। चीनको अन्वेषण तथा व्यवसायिक मोडल अमेरिकाजस्ता देशभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ।
पार्टी महाधिवेसनबाट अरु के परिवर्तन आउन सक्ला?
हामीले संस्थागत परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ। पार्टी र राज्य दुवैमा ‘नेसनल सुपरभिजन कमिसन’ र ‘नेसनल फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी कमिसन’ को स्थापनाको कुरा छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने संस्थागत परिवर्तनहरु यी पनि हुन्। त्यस्तै पार्टी विधान संशोधन, सीको शासनसम्बन्धी विचारबारे पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
यो महाधिवेसनले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई कस्तो असर पु¥याउला? कुन क्षेत्रमा यसको मुख्य असर पर्ला? के सम्बन्ध सुधार हुनेछ त?
यस विषयमा केही भन्न सकिने बेला भइसकेको छैन। तर केही साताभित्रै राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनको भ्रमण गर्नेछन्। पार्टी महाधिवेसनलगत्तै सीले विदेशी प्रतिनिधिसँग भेट गर्नेछन्। खासगरी अमेरिकी व्यवसायी र पूर्व राजनीतिज्ञहरुसँग। यसले के देखाउँछ भने सी अमेरिका–चीन सम्बन्धप्रति निकै सचेत छन् र यो सही दिशामा अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन्। साथै बजारमा पहुँच, निष्पक्ष व्यापार, वित्तीय उदारीकरण र सेवा क्षेत्रमा खुलापनजस्ता विषयमा ट्रम्पले निश्चय नै दबाब दिनेछन्। यी सबै कुरा सीको भाषणमा उल्लेख थियो। त्यसैले उनले यी विषयलाई महत्व दिइरहनेछन्।
चियाको पातमा जोखाना हेर्दा महाधिवेसनमा सीको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ?
एउटा सन्देशचाहिँ स्पष्ट छः सी जिनपिङको अवस्था राम्रो छ र उनले आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गरेका छन्। तर उनी ‘बाहुबली शक्तिआधार’ (स्ट्रङम्यान पावर बेस) मा फर्किए भन्न म चाहन्नँ। यदि उनीसँग त्यस्तो शक्तिको आधार हुन्थ्यो भने स्थायी समितिमा के होला भनेर हामी चासो नै दिँदैनथ्यौँ। तर यो कुरा त्यस्तो छैन। चीनको नेतृत्व अझै पनि मूलतः ‘टिमवर्क’ नै हो। यद्यपि सी अन्य नेताभन्दा निश्चय नै बढी शक्तिशाली छन्।